Wellness cottage NaHory - I-Airbnb
Wellness cottage NaHory
Zlaté Hory, Olomouc Region, Czechia
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKarel
Indlu yokuhlala kakuhle uNaHory-Zlaté Hory-iphuli yokuqubha, i-sauna kunye ne-whirlpool. I-Cottage NaHory yindawo ekumgangatho ongasentla enezixhobo kwaye inomtsalane kakhulu kwindawo ephezulu yelali i-Ondřejovice. Ukuba ufuna ukufumana iholide apho ungaphuthelwa nantoni na, le ndlu yeyakho. Ichibi langaphandle, i-whirlpool kunye ne-sauna yaseFinnish iya kwenza iholide yakho ibe ngamava angenakulibaleka. Kuba esi sakhiwo sikumhlaba omkhulu onendawo emalunga ne-5000 m2, uqinisekisiwe ukuba ngasese okungaphazanyiswa. Indlu ijikelezwe buhlaza kunye nemithi.
Indlu yokuhlala kakuhle uNaHory-Zlaté Hory-iphuli yokuqubha, i-sauna kunye ne-whirlpool. I-Cottage NaHory yindawo ekumgangatho ongasentla enezixhobo kwaye inomtsalane kakhulu kwindawo ephezulu yelali i-Ondřejovice. Ukuba ufuna ukufumana iholide apho ungaphuthelwa nantoni na, le ndlu yeyakho. Ichibi langaphandle, i-whirlpool kunye ne-sauna yaseFinnish iya kwenza iholide yakho ibe ngamava angenakulibaleka. Kuba esi sakhiwo sikumhlaba omkhulu onendawo emalunga ne-5000 m2, uqinisekisiwe ukuba ngasese okungaphazanyiswa. Indlu ijikelezwe buhlaza kunye nemithi. Uninzi lomhlaba ojikeleze indlu uhlala kwindawo enengca. Kumgangatho ophantsi kukho ikhitshi eliphangaleleyo elinendawo yokutyela, ehlala abantu abali-13. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto zasekhitshini. Kukho iifriji ezimbini ezinkulu ezifumanekayo zokugcina ukutya, enye yazo yeyaseMelika enomenzi womkhenkce oluzenzekelayo. Izixhobo zombane zibandakanya umatshini we-espresso, i-microwave, itoaster, itoaster, iprosesa yokutya, isitovu sokungenisa, i-oveni yomoya eshushu esebenza ngeendlela ezininzi, ifryer, ihood. Kukwakho nevenkile yewayini yeebhotile ze-160, apho iwayini yaseMoravian ilungiselelwe wena, onokuthi uyithengele ukusetyenziswa. Ungasebenzisa ivenkile yewayini ukupholisa iziselo zakho. Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngesofa, itafile kunye nendawo enkulu ye-smart TV. I-cottage ibonelela ngendawo yokuhlala abantu ukuya kuthi ga kwi-13 kumagumbi okulala ama-5. Kukho amagumbi amahlanu - amagumbi amabini kumgangatho ophantsi kunye namagumbi amathathu aphezulu, amagumbi amathathu anebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela langasese kunye nendlu yangasese (i-2x ishawa, i-1x yokuhlamba) - amabini kula magumbi aphantsi. Ngapha koko, igumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga 90 cm ububanzi kunye negumbi lokuhlambela labucala elinebhafu kunye nendlu yangasese. Igumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye eyi-120 cm ububanzi kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nendlu yangasese. Igumbi ngalinye lixhotyiswe ngeTV enescreen esicaba, ukufudumeza kunye ne-air conditioning, ifenitshala kunye nendawo yokugcina iimpahla zakho. Kwimeko yokuhlala ixesha elide, ngokuqinisekileyo uya kuxabisa iwasha kunye nesomisi. Kukho izinto zangasese ezisisiseko (iitawuli, iphepha langasese, isepha) kunye nesomisi seenwele kwigumbi lokuhlambela ngalinye. Onke amagumbi aneemfama zangaphandle kunye neinethi zengcongconi ezifestileni. Kukho amagumbi okuhlambela amahlanu, amabini anebhafu kwaye amathathu aneshawari. Igumbi lokuhlambela ngalinye linendlu yangasese. Ukongeza, enye yangasese ikumgangatho ophantsi ecaleni kwekhitshi kunye negumbi lokuhlala. Ukufudumala kunye ne-air conditioning kwigumbi ngalinye. Umnyango ongasemva, ifestile yesiFrentshi ukusuka kwigumbi lokutyela okanye kwigumbi lokuhlala ikhokelela kwi-terrace yangaphandle. Kukho izihlalo ezihlala abantu abali-14, ezigqunywe ziiparasols. Kwi-terrace yangaphandle unako ukugcoba kwi-grill enkulu ye-Weber, eyinxalenye yezixhobo ze-terrace. Kukho kwakhona uxhumano lombane kwi-terrace. Kwiinyanga zasehlotyeni, uya kuxabisa ngakumbi ichibi langaphandle (eliphuphumayo 7m x 4m x 1.5m ubunzulu) enophahla. Eli dama lifudumezelelwa wena ukuya kumaqondo obushushu angama-29 ° C kwixesha elisuka kwi-1.6 ukuya kwi-30.9. Idama linendawo enengca eneebhedi zelanga zokuphumla nokutshiswa lilanga. Iqula kwakhona lineshawari yangaphandle. Ukuba kubanda, ngokuqinisekileyo uya kuxabisa i-whirlpool, ebekwe kwindawo engaphandle. Yi-whirlpool yobuchwephesha ephuphumayo yabantu aba-6. Ifudunyezwa unyaka wonke ngama-38 ° C. Ecaleni kwe-whiprool kukho i-sauna yase-Finnish yabantu aba-4 abaneebhafu zomphunga. Kukho ishawa yokupholisa phambi kwesauna. Sikwacinga ngabantwana bakho, abanebala lokudlala elinojingi kunye nezakhelo zokukhwela. Kukwakho neendawo zokudlala zabantwana kunye nezasedama kwisakhiwo. Iintsana kunye nabantwana abancinci, kukho iibhedi ezi-3 ezinelinen yokulala kunye ne-monitor yokuphefumula. Istroller enobunzulu / ubunzulu bezemidlalo nayo iya kufumaneka ngokupheleleyo kuwe. Kwiinyanga zasehlotyeni, kwimozulu embi, unokwenza ukusetyenziswa kwegumbi eliqhelekileyo kunye negumbi lemidlalo, elisesihlomelo se-barn. Kukho ibhola edlalwa etafileni, ihoki yomoya, netafile enkulu enezitulo ezinokuhlala abantu abali-14. Ungasebenzisa eli gumbi eliqhelekileyo ebusika, kodwa alitshisi. Kumgangatho ophantsi we-barn kukho igumbi elitshixwayo lokugcina izixhobo zakho zemidlalo (iibhayisekile, i-skis, njl.). Eli gumbi linesomisi se-ski boot. Kukwakho nendawo yomlilo emva kweshedi ukuba ufuna ukonwabela ukuphumla ngumlilo wenkampu. Yahlula i-driveway eya kwisakhiwo. Ukupaka kwindawo yokupaka yabucala phambi kwendlu kunokwenzeka ukuya kuthi ga kwiimoto ezisi-8.
Karlova Studánka-Dlouhé Straje-Praděd-Mossy Lakes-Iintsimbi zegolide
Ukuhamba ngebhayisekile, ukukhwela intaba, ukutyibilika ekhephini, ukuya echibini eline-mossy (iRejvíz State Nature Reserve inendawo yayo yeehektare ezingama-350 eyona peat bog inkulu eMoravia naseSilesia).
I-ski slope ekufutshane i-2 km, i-Dolní Údolí, indawo yase-U Pekina.
Umbuki zindwendwe ngu- Karel